50 Best Balance Sheet Ad Images in 2020 - BigSpy
Home - Anil Lamba
Download Your FREE Balance Cheat Sheet
Tax Seekho Online
Financial Advisor Tim Hayes Boston AIF®, CRPS®, AWMA®, CFS®
Somich & Associates CPAs | Mentor, OH
SSKO Financial Training Centre
MYOB Software & On Job Training Class 🌿 အိမ်ကနေ Online ဖြင့် တက်ချင်သူများရယ်၊ ရန်ကုန်ကိုမလာနိုင်၍ နယ်ကနေ တက်ချင်သူများ၊ နိုင်ငံခြားမှ တက်ချင်သူများပါ တက်ရောက်နိုင်သော MYOB Software သင်တန်းကို 07 November 2020 မှာစပါမည်။ 🌿 Account နှင့် MYOB ရဲ့ သဘောသဘာဝ ထဲထဲဝင်ဝင် တတ်သိပြီး MYOB software ကိုအသုံးပြု၍ Company ၏ Final Accounts ဆွဲနိုင်သည်အထိ သင်ပေးပါသည်၊၊၊ 🌿 OJT (On Job Training) ပါ သင်ပေးသွားမည်၊၊၊၊ 🔹 P & L & Balance Sheet 🔹 Trail Balance 🔹 Budget preparation 🔹 Genral Ledger & Reports ထုတ်နည်းများပါ သင်ပေးသွားမည်၊၊ 💲သင်တန်းကြေး - (ပုံမှန် 70,000 Kyats)‌ ‌သင်တန်းသားများ သက်သာ​စေလို သဖြင့် discount (20,000) kyats ပေးသောကြောင့် သင်တန်းကြေး 50,000 kyats သာကျသင့်ပါမည်။ 🔹သင်တန်းကာလမှာ5weeks ဖြစ်ပြီး တပါတ် 1ရက် သင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ 🔹Online ကို Zoom application ဖြင့်သင်မှာဖြစ်ပြီး Text bookကိုemail ဖြင့်ပို့ပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်။ 🔹Computer ဖြင့်ပြန်လည်လေ့ကျင့်မှသာ တတ်မြောက်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ကိုယ်ပိုင် Computer ရှိရပါမည်။ 📅Commencing Date : 07 Nov 2020 (‌စနေ Only) Every Saturday: 1:00pm to 3:00 pm ✅Bank Account နဲ့ အပ်‌နှံလိုသူများအတွက် Pyae Thin Nwe 0167 2240 1000 0719 AYA Bank (Junction Square Branch) Pyiee Thin Nwe 2643 0126 4003 25101 KBZ Bank (Kamaryut-Khine Shwe War Branch) Kpay (09 794 846 401) Wave Money (09 794 846 401) 👉သင်ကြားမှုထိရောက်စေရန် လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားပါ၍ ကြိုတင်စာရင်းပေး အပ်နှံသူများသို့ ဦးစားပေးပါမည်။ 🏆သင်တန်းပြီးဆုံးလျှင် သင်တန်းမှ Completion Certificate ပေးအပ်မည်။ 🏫လိပ်စာ - တိုက် ၂ ၊အခန်းနံပါတ် ၇၊ နာနတ်တောလမ်း၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန် (Novotel Hotel နှင့် စိုက်ပျိုးရေးမှတ်တိုင် အနီး)🏃🏃🏃🏃🏃 စိုက်ပျိုးရေး မှတ်တိုင် ( Bus Numbers: ၂၁၊ ၃၅၊ ၃၉၊ ၆၀၊ ၆၅၊ ၇၇၊ ၇၈) ပြည်ရိပ်မွန် မှတ်တိုင် (Bus Numbers: ၁၁၊ ၂၂) 📞 : 09 794846401
GST Suvidha Center Office Cuttack Contact - 8260582265
🚀 From Freelancer to Founder 🚀 Did you know that 90% of Freelancers have the wrong tax structure in place? Having the right business structure in place can help maximize potential earnings and make lifealot less stressful. Free up more time & strengthen the balance sheet with Collective. We are the ultimate secret-weapon for freelancers to help manage their business setup, tax, accounting, and their entire back office. Estimate your tax savings for FREE to learn more.
Advanced Industrial VastuTM – Learn to Enhance Revenue of your Business, Commercial Unit Swiftly and Effortlessly
S.K Tax Consultant
50 Best Btn Ad Images in 2020 - BigSpy
50 Best Blue Stacks Ad Images in 2020 - BigSpy
50 Best Backsplash Tile Ad Images in 2020 - BigSpy
50 Best Blood Test Ad Images in 2020 - BigSpy
50 Best Barbie Dolls Ad Images in 2020 - BigSpy
50 Best Bowser Ad Images in 2020 - BigSpy
50 Best Bmg Ad Images in 2020 - BigSpy